နောက်ဆုံးတရားစီရင်ချက် - ဆွစ်ဇလန်ဘုရားသခင့်ကမ္ဘာချီဘုရားရှိခိုးကျောင်း
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ 2019-04 > နောက်ဆုံးတရားစီရင်
တရားစီရင်ရာနေ့တွင် သင်သည် ဘုရားသခင်ရှေ့၌ ရပ်တည်နိုင်ပါမည်လား။ ၎င်းသည် အသက်ရှင်သူနှင့်သေသူအားလုံး၏တရားစီရင်ခြင်းဖြစ်ပြီး ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ နီးကပ်စွာဆက်စပ်နေသည်။ ခရစ်ယာန်အချို့သည် ဤအဖြစ်အပျက်ကို ကြောက်ရွံ့ကြသည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည် ပြစ်မှားသောကြောင့် “ဘုရားသခင်၏ဘုန်းအသရေကို ကင်းမဲ့၍ အပြစ်သားများဖြစ်ကြသည်” (ရောမ၊ 3,23).
ဘယ်နှစ်ကြိမ် အပြစ်လုပ်သလဲ။ ရံဖန်ရံခါ? နေ့တိုင်း? လူသားသည် မွေးရာပါ အပြစ်ရှိပြီး အပြစ်သည် သေခြင်းသို့ ရောက်စေသည်။ “စုံစမ်းနှောင့်ရှက်ခြင်းကို ခံရသောသူအပေါင်းတို့မူကား၊ ထိုနောက် တပ်မက်မှု ပဋိသန္ဓေနေခြင်းသည် ဒုစရိုက်ကို ဖြစ်စေ၏။ အပြစ်သည် စုံလင်သောအခါ၌မူကား၊ 1,15).
သို့ဖြစ်လျှင် သင်သည် ဘုရားသခင်ရှေ့၌ ရပ်တည်ပြီး သင့်ဘဝတွင် သင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် ကောင်းမှုအားလုံးကို ပြောပြနိုင်မလား။ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ မင်းဘယ်လောက်အရေးကြီးသလဲ၊ ပရဟိတအလုပ် ဘယ်လောက်လုပ်ခဲ့လဲ။ မင်းဘယ်လောက်အရည်အချင်းရှိလဲ။ မဟုတ်ပါ - သင်သည် အပြစ်သားဖြစ်နေသေး၍ ဘုရားသခင်သည် အပြစ်ဖြင့် အသက်မရှင်နိုင်သောကြောင့် ဤအရာတစ်ခုမှ သင့်အား ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။ "မကြောက်နဲ့ သိုးငယ်! အကြောင်းမူကား၊ သင်တို့အဘသည် သင်တို့အား နိုင်ငံတော်ကို ပေးသနားခြင်းငှါ အလိုရှိသောကြောင့်တည်း။” (လုကာ ၁2,32) ခရစ်တော်၌ ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်သာလျှင် ဤစကြဝဠာလူသားပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးသည်။ သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အသေခံတော်မူသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များအားလုံးကို ကိုယ်တော်တိုင် ခံယူခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်နှင့် လူသားအနေဖြင့်၊ သူ၏ ပူဇော်သက္ကာသာလျှင် လူသား၏ အပြစ်အားလုံးကို ဖုံးအုပ်ပြီး ဖယ်ရှားနိုင်သည် - ထာဝရနှင့် သူ့ကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် လက်ခံသူတိုင်းအတွက် ဖြစ်သည်။